Vula umnxeba · ama-7 + 1 amaqhekeza · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Amaqhekeza ama-7 + 1
Ukusuka kwi-Realillusion: Atefeh Kheirabadi kunye neMehrad Sepahnia
Sijonge abadlali besibhozo kunye nabadlali abafuna ukuthatha inxaxheba kwiprojekthi yefilimu malunga nokuchasana nelifa lobukoloniyali kunye nolwakhiwo lwamandla. Lo mnxeba uvulekileyo ujolise kwabasetyhini abaneminyaka eyi-18 ukuya kwi-75 + nangaphezulu okanye ngaphandle kwembacu kunye namava okufuduka.
Okwangoku, Yiza uhambe, 2020, Realillusion
Iprojekthi yefilimu "iziqwenga ezi-7 + 1" ibhekisa kwinkcazo yeengxelo zabafazi abasixhenxe * abajongana neendlela zabo ngokuchasene nelifa lobukoloniyali kunye namandla olawulo. Sigxila kwizithuba zobuqu neziqhelekileyo. Sisonke siya kugxila ngakumbi kwiindidi zeendlela zokumelana: kubandakanya ukungathobeli koluntu, umsebenzi wobugcisa. Siyazibuza, ngaba ukusinda ikwayindlela yokumelana?
Indlela yethu iya kukhuthazwa yingqokelela yeenoveli zikaNezami "Imifanekiso esixhenxe" 1, kwaye ifilimu isekwe kumaqhekeza asibhozo ahlukeneyo: amabali obomi asixhenxe abaliswa ngabafazi * abanezicwangciso zobomi ezahlukeneyo, iminqweno kunye nezinto eziyinyani zehlabathi. Ibali ngalinye liqhekeza kwaye linombala walo, ophawuleka ngezibane, iipropu, njl.
Sifuna abadlali abathathu * ngendima: umakhulu / umama / intombi, kunye nabanye abadlali abathathu * kunye nabadlali ababini *.
Abasetyhini * abaneminyaka eyi-18 ukuya kwi-75 + banokufaka isicelo-nokuba ngaphandle kweembacu kunye namava okufuduka.
Ukudubula kuqala ngoJulayi 2021, ixesha lokudubula: iintsuku ezi-2 ngomntu ngamnye
Bonke abadlali beqonga kunye nabadlali bafumana intlawulo.
Le projekthi iveliswa yiRealillusion: Atefeh Kheirabadi neMehrad Sepahnia kwaye ixhaswe yiOyoun njengeprojekthi yoluntu.
Ngaba uyafuna ukufaka isicelo?
Nceda usithumelele amaxwebhu akho esicelo kubandakanya
Iphepha elinye lekharityhulamu
Inkuthazo yakho emfutshane kwifomu yoyilo, o.k.t. njengevidiyo, izinto zokubhala okanye ifayile yeaudio.
ku info@mehratefe.com ngumhla wokugqibela wesicelo ngoMeyi 31.05.2021, XNUMX
UAtefeh Kheirabadi kwaye Mehrad Sepahnia ngabalwi. Bobabini, ukuxhathisa kwezopolitiko sisiseko sobomi babo kunye nomsebenzi wabo wobugcisa. Bangabalingisi bemiboniso bhanyabhanya, babiza i-tandem yabo yobugcisa "yi-Realillusion". Eli gama lihambelana nonxibelelwano phakathi kwenyani kunye noko kufanelekileyo kwindlela yabo yokusebenza, indibanisela yovavanyo kunye namava.
Ngolwazi oluthe kratya okanye imibuzo, thumela i-imeyile ku: info@mehratefe.com.
Le projekthi ixhaswa ngemali yi-Socioculture Fund.